တရုတ်နိုင်ငံက ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံနှင့် နက်ရှိုင်းစွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီး ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုအား ထိန်းသိမ်းရန် ဆန္ဒရှိ - Xinhua News Agency
ပေကျင်း ၊ ဇန်နဝါရီ ၁၈ ရက်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဝမ်ရိက တရုတ်နိုင်ငံ နှင့် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတို့သည် ၎င်းတို့၏ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုအား ထိန်းသိမ်းကာ အနှောင့်အယှက်အဟန့်အတားများအား ဖယ်ရှားပြီး နက်ရှိုင်းစွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားသင့်ကြောင်း နှင့် နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သည့်အနာဂတ်တစ်ခုအား အတူတကွဖွင့်လှစ်သင့်ကြောင်း ဇန်နဝါရီ ၁၇ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ဝမ်ရိက ယင်းမှတ်ချက်အား တရုတ်-ဖိလစ်ပိုင် ဆက်ဆံရေးအတွက် မနီလာဖိုရမ်၌ ရုပ်သံမှတစ်ဆင့် မိန့်ခွန်းပြောကြားရာတွင် ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသမ္မတ ရိုဒရီဂို ဒူတာတေး၏ တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ဆက်ဆံရေးအား တိုးတက်စေရန် မဟာဗျူဟာဆုံးဖြတ်ချက်သည် ဖိလစ်ပိုင်ပြည်သူများ၏ အဓိကကျသောအကျိုးစီးပွားများနှင့် ကိုက်ညီသည်ကို အချက်အလက်များက သက်သေပြခဲ့သည်။ ယင်းသည် တရုတ်နိုင်ငံ နှင့် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတို့၏ ဘုံအကျိုးစီးပွားများ နှင့် ငြိမ်းချမ်းသော ဒေသတွင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလမ်းကြောင်း နှင့်လည်း ကိုက်ညီကြောင်း ဝမ်ရိက ပြောကြားခဲ့သည်။
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ မနီလာမြို့၌ တရုတ်နိုင်ငံရန်ပုံငွေဖြင့် တည်ဆောက်နေသည့် Binondo-Intramuros တံတားလုပ်ငန်းခွင်အား ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် နိုဝင်ဘာ ၁၈ ရက်တွင် တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်-ဖိလစ်ပိုင် နှစ်နိုင်ငံအကြား ချစ်ကြည်ရင်းနှီးစွာဖလှယ်မှုများသည် နှစ်ပေါင်း ၁,၀၀၀ ကျော် ကြာမြင့်ခဲ့သည်ကို သတိပြုမိကြောင်း ၊ တရုတ်နိုင်ငံသည် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ COVID-19 ကာကွယ်ဆေး လိုအပ်ချက်များအား ဆက်လက်အာမခံပေးရန် ဆန္ဒရှိကြောင်း ဝမ်ရိက ပြောကြားခဲ့သည်။ တရုတ်နိုင်ငံသည် ဗိုင်းရပ်စ်အား အနိုင်ရသည်အထိ ကုသနိုင်သည့် ဆေးဝါးများ နှင့် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး စွမ်းဆောင်ရည်တည်ဆောက်ခြင်းဆိုင်ရာတို့တွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်းလည်း ဆိုသည်။
တရုတ်နိုင်ငံသည် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ လယ်ယာထွက်ကုန်ပစ္စည်းများအား ပိုမိုတံခါးဖွင့်လှစ်ရန် နှင့် ၎င်းတို့၏ စက်မှုလုပ်ငန်း နှင့် ခေတ်မီရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအား အရှိန်မြှင့်တင်ရေး ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအား ကူညီရန် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအား တိုးမြှင့်ပြီး ၎င်းတို့၏ လွတ်လပ်သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ရေး ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားရန် ဆန္ဒရှိကြောင်း ဝမ်ရိက ပြောကြားခဲ့သည်။
တောင်တရုတ်ပင်လယ်အရေးကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် တစ်ဖက်နှင့် တစ်ဖက် သက်ဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးများ နှင့် တောင်းဆိုမှုများအား မထိခိုက်စေဘဲ အတူတကွဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများအား မြှင့်တင်ရန် ပြင်ဆင်ထားကြောင်း ဝမ်ရိက ပြောကြားခဲ့သည်။ တရုတ်နိုင်ငံသည် စိန်ခေါ်မှုများအား အခွင့်အလမ်းအဖြစ် ပြောင်းလဲရန် ၊ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ကူညီရန် နှင့် နှစ်နိုင်ငံပြည်သူများအကြား ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုအား အားကောင်းလာရေးအတွက် ဆန္ဒရှိကြောင်းလည်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ဝမ်ရိက နှစ်ဖက်စလုံးအနေဖြင့် အာဆီယံဗဟိုပြု ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး မူဘောင်ကို ထိန်းသိမ်းရန် နှင့် တရုတ်-အာဆီယံ ဘက်စုံမဟာဗျူဟာမြောက် မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေးကို နက်ရှိုင်းစေရန် ပြောကြားခဲ့ကြောင်းလည်း သိရသည်။ (Xinhua)
BEIJING, Jan. 17 (Xinhua) — Chinese State Councilor and Foreign Minister Wang Yi said Monday that China and the Philippines should maintain their friendship, remove disruptions, deepen cooperation, and jointly open upabetter future for bilateral relations.
Wang made the remarks when addressing the Manila Forum for China-Philippines Relations via video.
Facts have proved that Philippine President Rodrigo Duterte’s strategic decision to improve relations with China is in line with the fundamental interests of the Philippine people. It is also in line with the common interests of China and the Philippines and the trend of peaceful regional development, Wang said.
Noting the friendly exchanges between the two countries have lasted for more than 1,000 years, Wang said China is willing to continue to guarantee Philippine COVID-19 vaccine needs. China will also cooperate on specific drugs and public health capacity-building until the virus is defeated.
China is willing to continue to open the door to more Philippine agricultural products and improve investment to help the Philippines accelerate its industrialization and modernization process and enhance its independent development capabilities, Wang said.
On the South China Sea issue, Wang said China is prepared to promote joint development without affecting each other’s respective rights and claims. China is also willing to turn challenges into opportunities, help the development of the Philippines, and strengthen the friendship between the two peoples.
Wang called on both sides to maintain the ASEAN-centered regional cooperation framework and deepen the China-ASEAN comprehensive strategic partnership. ■
Photo 1 – Chinese State Councilor and Foreign Minister Wang Yi addresses the Manila Forum for China-Philippines Relations via video on Jan. 17, 2022. (Xinhua/Ji Chunpeng)
Photo2– Workers work at the construction site of the China-funded Binondo-Intramuros Bridge in Manila, the Philippines, Nov. 18, 2020. (Xinhua/Rouelle Umali)